आज चन्द्रग्रहण लाग्दैछ यस्तो बेला भुलेर पनि सेक्स गर्नु हुदैन,आज यी ५ कामहरु गर्नु हुदैन « Pana Khabar
आज चन्द्रग्रहण लाग्दैछ यस्तो बेला भुलेर पनि सेक्स गर्नु हुदैन,आज यी ५ कामहरु गर्नु हुदैन
प्रकाशित मिति : Aug 7, 2017
समय : 7:45 pm
आज राती भुलेरपनि यौन सम्बन्ध राख्नु हुदैन, किनकी आज चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । आज गर्न नहुने ५ काम, सबैको जानकारीको लागी सेयर गरौं ।
आज सोमवार शुक्ल पूर्णिमामा खण्डग्रास चन्द्रग्रहण परेको छ । चन्द्रग्रहणबाट सबै राशिहरू प्रभावित हुन्छन् तर केही राशिलाई फाइदा अनि अन्य केहीलाई बेफाइदा हुन्छ ।
ग्रहणको समयमा विभिन्न काम गर्न नहुने भनेर शास्त्रमा उल्लेख छ । यहाँ ग्रहण लागेको समयमा गर्न नहुने विभिन्न ५ कुराको चर्चा गरिएको छ ।
१ यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन
ग्रहणको समयमा रोमान्टिक मुड नबनाउनुस् । यो समयमा यौन सम्बन्ध राख्नु राम्रो मानिँदैन । शास्त्रमा ग्रहणको समयमा यौन सम्पर्क भएर बच्चा जन्मिएमा त्यस्तो बच्चा राक्षस समान पैदा हुने र दुर्गणल भरिएको हुने उल्लेख छ ।
२ भोजन नगर्नु
ग्रहण लागेको समयमा भोजन तयार गर्नु भएको छ भने त्यसलाई ग्रहण नगर्नुस् । ग्रहणको समयमा भोजन गर्नु हुँदैन । यदि भोजन बाँकि छ र ग्रहणको समयमा परेको छ भने ग्रहण सकिएपछि पनि सो खाना नखानुस् । ग्रहण लागेको समयमा पाकेको खाना उचित नहुने र यदि खानेकुराहरु छन् भने त्यसमा तुलसीको पात राखेर छोप्नु पर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
३ ग्रहणपछि सरसफाइ गर्नु
ग्रहण सकिएपछि घरमा सरसफाइ गर्नु उचित हुन्छ । ग्रहणको समयपछि घर मन्दिर वा पुजा कोठा समेत सफाइ गर्ने र मुर्तीहरुमा जल फेर्नु पर्ने शास्त्रा उल्लेख छ ।
४ पुजा नगर्नु
ग्रहण समयमा पुजा गर्नु हुँदैन । मन्दिरमा पनि ग्रहणको समयमा पुजा पाठ बन्द गर्नु पर्छ । यो समयमा केही मन्त्री भने जप गर्न सकिने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता मन्त्रमा ऊँ नमस् शिवाय, श्रीराम, सीताराम, ऊँ रामदूताय नमस् आदि हुन सक्छन् ।
५ गर्भवती बाहिर जानु हुँदैन
गर्भवती महिला ग्रहणको समयमा कहिल्यै पनि बाहिर जानु हुँदैन । ग्रहणको समयमा बाहिर निस्कँदा बच्चामा खराव असर पर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । ग्रहणको समयमा विभिन्न पराबैजनी किरणहरु उत्पन्न हुने हुँदा बच्चामा नकारात्मक असर पर्छ । ग्रहणको समयमा वातावरणमा समेत नकारात्मक किरणहरु पैदा हुने हुँदा घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो हुन्छ ।
२३ साउन २०७४
डा.राजेन्द्र भद्रा भन्छन्, यसरी योनिद्वार वरिपरि पलाएको मासु हटाउन सकिन्छ !
लिंग भन्दा कण्डम छोटो भयो भन्दै लामो कण्डम बनाउन सरकारले उर्दी नै जारी गर्‍यो
बाडुली किन लाग्छ ? यस्तो छ– बाडुली लाग्नुको रहस्य
गहुँतको यस्तो चमत्कार, १४८ रोगको औषधि भएकाे रुसका वैज्ञानिकको अनुसन्धानबाट पुष्टि